वडावासीको पेट भर्दै वडाध्यक्ष लामा, दैनिक एक हजारलाई खाना SULSULE:A Truly Nepali News Portal
चिप्लेढुङ्गा, जेठ ६
पोखराको १३ नं. वडाले बन्दाबन्दीका कारण बिहान बेलुकाको छाक टार्न समस्यामा परेकालाई लक्षित गरेर खाना वितरण गर्न थालेपछि विपन्न परिवारले वडामा गएर भोको पेट भर्ने गरेका छन् । सोही वडामा बस्दै आएका ३० वर्षीय मन विकले वडाले खाना वितरण गरेपछि भोको बस्नु नपरेको बताए । “ज्यामी काम गर्थें, बन्दाबन्दी भयो, अहिले भोको पेट भरिएको छ अब त काम गर्न पाए पनि हुने”, विकले भने ।
खानाका लागि लाइनमा पालो पर्खिरहेकी सुन्तली विकले भनिन, “मलाई त काम गर्न कहिले पाइएला भनेर अत्यास लागेको छ, अहिले भोको पेट अध्यक्षले भर्नुभएको छ, तर सधैँ त हुन्न होला नि ? कहिले पानी पर्छ, कहिले हावा चल्छ, खाना लिन आउन पनि समस्या नै हुन्छ तर बाध्यताले आउनैपर्छ ।” उनले आफू र श्रीमान् मात्रै रहेकाले दुई जनालाई खाना लैजाने गरेको बताइन् ।
वडा नं. १३ वडाका विपन्न परिवारलाई दुई चरणमा राहत वितरण गरे पनि ग्यासलगायत अन्य समस्याले खाना पकाउन असहज भएको गुनासो आएपछि वैशाख २३ गतेदेखि विपन्न परिवारका सदस्यलाई बिहान बेलुका नै खान खुवाउन शुरु गरेको वडाध्यक्ष दर्शन लामाले बताए । “हामीले पहिलो चरणमा एक हजार ४२३ र दोस्रो चरणमा केही तिनै व्यक्तिसहित अन्य गरी एक हजार ६९५ जनालाई राहत बाँड्यौँ तर कतिपयले खान पकाउन ग्यास भएन अरु समस्या भयो भनेर भन्न थाल्नुभयो । उनीहरुलाई लक्षित गरेर वैशाख २३ गतेबाट खाना खुवाउन शुरु गरेका हौँ ।”
उनले प्रवेशद्वारमा थर्मलगनबाट ज्वरो परीक्षण गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरेर मात्र भित्र खानाका लागि प्रवेश दिने गरेको बताए । “सुरक्षाको सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाएका छौँ, फेरि पनि चाप दिनदिनै बढिरहेको छ, जसले जति परिवार छन् त्यति नै खाना आफूले लिएर आएको भाँडामा राखेर लैजानुहुन्छ । अब अर्को तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेका छौं ।